Datin'ny WWDC 2016, MacBook 12 "vaovao, beta vaovao an'ny OS X El Capitan ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy any Mac aho
Datin'ny WWDC 2016, MacBook vaovao 12,, beta vaovao an'ny OS X El Capitan ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Jordi Gimenez | | Apple, Mac OS X, Solosaina Mac
Ity herinandro ity dia iray amin'ireo matanjaka indrindra amin'ny resaka vaovao mifandraika amin'ny tontolon'ny Apple ary indrindra ho antsika izay tia Mac. Eny, nanapa-kevitra i Apple tamin'ny farany fa handefa ilay MacBook 12-nohavaozina miaraka amin'ireo processeur vaovao Intel, izay omen'izy ireo fanatsarana ny fizakan-tena sy ny loko volamena vaovao. Azonao jerena ao amin'ny lahatsoratra izany rehetra izany fa nandefa minitra vitsivitsy taorian'ny nahalalanay ity fanavaozana ity izay nahagaga anay ny media rehetra. Eny, marina fa ny tsaho momba ity fanavaozana ity dia tao anaty honohono farany indrindra, saingy tsy nisy nieritreritra fa ho tonga tsy ho ela. Ho fanampin'ity fanavaozana ny solosaina finday manify indrindra sy maivana indrindra avy any amin'ireto avy any Cupertino, ny herinandro dia feno vaovao mahaliana izay ho fintininay aorian'ny fitsambikinana.
Vantany vao navotsotra ireo MacBook vaovao, ny fitsapana fampisehoana voalohany tsy niandry izy ireo. Ny valiny azo tamin'ireto fitsapana benchmark, andrasana amin'ny fanatsarana napetraka ao amin'ny masinina ary amin'ny lafiny lehibe kokoa noho ny fanodinana vaovao.
Etsy ankilany ary alohan'ity fandefasana ity dia mila manasongadina ny ora sivana alohan'ny vaovao ofisialy avy amin'ny WWDC tamin'ity taona 2016 ity. Raha ny tena izy dia Siri miandraikitra ny famoahana ny vaovao momba ny datin'ity WWDC 2016 ity, saingy avy eo tonga ny fanamafisana ofisialy avy amin'i Apple.
Taorian'ity vaovao mahaliana ity dia tonga ny vaovao momba ny fahafatesana nambara. Manzana ajanony ny fanohanana amin'ny fomba ofisialy QuickTime ho an'ny sehatra Windows, amin'izay dia nanambara fanjavonana izay efa niandry elaela vao ho tonga.
Ny ampitso ny vaovao momba ny betas vaovao an'ny OS X, Ny iOS sy ny watchOS ho an'ny mpamorona dia nanao ny elanelana mifanandrify amin'izany. Raha ny momba ireo fanavaozam-baovao ihany dia tsy misy zavatra betsaka holazaina afa-tsy vitsivitsy fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra sy ny fitoniana.
Farany dia tsy tiako hisy olona tsy hahita ny asa vitan'i CURVED miaraka amin'ireo mpamaky Mac taloha misy ny teknolojia farany. Amin'ny ankapobeny ireo Mac na eMac ireo, satria nantsoin'ireo tompon'andraikitra amin'ny famolavolana azy ireo izy ireo, dia tsy ho hita eny amin'ny magazay fa mahaliana ny mahita azy ireo amin'ity horonan-tsary ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Datin'ny WWDC 2016, MacBook vaovao 12,, beta vaovao an'ny OS X El Capitan ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Hivoaka koa ve ireo MacBook Pros vaovao?
Ahoana ny famolavolana kapila exFAT hiasa amin'ny Windows sy OS X
Microsoft nandatsaka fitehirizana OneDrive maimaim-poana ary mitovy amin'ny iCloud